GO'AAN: Man United Oo Go'aamisay Xiddiga Cajiibka Ah Ee Ay Qiimaha Jaban Ugu Dhaqaaqayso Haddii Ay Weydo Jadon Sancho & Ousmane Dembele - Gool24.Net
GO’AAN: Man United Oo Go’aamisay Xiddiga Cajiibka Ah Ee Ay Qiimaha Jaban Ugu Dhaqaaqayso Haddii Ay Weydo Jadon Sancho & Ousmane Dembele
Kooxda Manchester United ayaa lagu soo warramayaa inay ka tashatay waxa ay yeeli doonto haddiiba ay maalmaha kooban ee ka hadhay suuqan weydo xiddigaha bar-tilmaameedka u ah ee Ousmane Dembele iyo Jadon Sancho.
Iyadoo uu soo dhaw-yahay xidhitaanka suuqa xagaagan oo Isniinta ku beegani, Man United ayaa ku qasbanaatay inay dookhyo kale u dhaqaaqdo maadaama oo ay Borussia Dortmund ku adkaysatay lacagta 108-da Milyan ee Pound ah ee ay Sancho ku doonayso.
Garabka weerar ee Barcelona ee Ousmane Dembele ayaa dhawaan noqday dookh kale ee ay Manchester u dhaqaaqi karto iyagoo amaah amaba 45 Milyan oo Pound ku heli kara xilli ay kooxda ree Catalan diyaar u tahay inay iibiso.
Si kastaba, sida uu sheegayo il-wareedka ESPN dookha saddexaad ee ay isha ku hayaan Red Devils ayaa noqonaya weeraryahanka kooxda Sevilla ee Lucas Ocampos.
Warbixinta ayaa sheegaysa in kooxda ree Spain ay diyaar u tahay inay iska fasaxdo xiddiga Argentina kasoo jeeda haddiiba ay ku hesho dalab 35 Milyan oo Pound ah waana lacag jaban marka la eego sixirka suuqa maanta.
Ocampos ayaa xilli ciyaareedkii hore 17 gool usoo dhaliyay Sevilla isaga oo ka caawiyay inay ku guuleystaan Europe League oo ay afar dhammaadka ku reebeen Man United.
ESPN ayaa intaas ku daraya in wakiilo ka socda Man United ay xilli horeba qiimayn ku sameeyeen qaab ciyaareedka Lucas Ocampos, dabeecadihiisa iyo xaaladiisa haatan ee Sevilla.
Ugu dambayn, isha warka laga helayo ayaa sheegaysa inay jirto fursad wanaagsan oo ay Man United ku heli karto Dembele iyadoo uu la xidhiidhay saaxiibkiisa xulka qaranka France ee Paul Pogba.